राहत वितरणमा जे देखियो - Tanahun Awaj
Home विचार/दृष्टिकोण	राहत वितरणमा जे देखियो
9th April 2020 9th April 2020 182 views
विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९, कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको लागि सरकारले सुरु गरेको लक डाउनको दोस्रो चरण पूरा भएको पनि आज दुइ दिन भएको छ । कोरोना भाइरसको कारणले शक्तिशाली भनिएका धेरै राष्ट्रहरुमा समेत मृत्युले तण्डब मच्चाइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रपनि धराशायी बनाइरहेको छ । यसर्थ यसको नियन्त्रणको लागि लक डाउन एउटा अपरिहार्य कदम हो भन्ने कुरा अहिले जो कसैले पनि महसुस गर्न सक्छन् । लक डाउनको कारणले नेपाल जस्तो गरीब र विकाशोन्मुख राष्ट्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा त असर पर्ने नै भयो, त्यो भन्दा पनि अप्ठेरो अवस्था सृजना भएको छ दैनिक जिविकोपार्जनको, विशेषगरी सहरी क्षेत्रमा दैनिक रुपमा ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिक वर्गहरुमा । यदि यसैगरी अझ १÷२ महिना लक डाउनको समयावधी थपिने हो भने नेपालको प्रायः हर नागरिकलाई दैनिक गुजारा टार्ने समस्या हुने निश्चित प्रायः छ । तर आजको मितिसम्म लक डाउनको कारणले हात मुख जोर्ने समस्या परेको कोहि छन् भने ति दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकहरु नै हुन् । देशको यहि परिस्थितीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले राहतको कार्यक्रम ल्यायो । जुन आफैमा एउटा प्रशंसनिय कार्य हो र विपत्तिको बेला एउटा जिम्मेबार अभिभावको दायित्व पनि । अहिले स्थानीय तहको नेतृत्वमा नेपालभरी राहत वितरण कार्य भइरहेको छ । नेपाल सरकारले वितरण गरेको राहत बाहेक कतिपय आमा समूह, क्लब, संघ संस्थाहरु या व्यक्ति विशेषबाट पनि राहत बाँडने काम भईरहेको छ । जुन मानवता र आपसी सहयोगको एउटा राम्रो उदाहरण हो र एउटा सह्रानिय कार्य पनि हो । नेपालमा कोरोना संक्रमणको अवस्था र विश्व परिदृश्यलाई मध्यनजर गर्दै लक डाउन अझ कति समय थप्ने, राहत वितरणको अवस्था के कस्तो रह्यो, दोस्रो चरणमा राहत वितरण आवश्यक छ/छैन, यस्ता विषयहरुमा सम्बन्धित निकायको राय सल्लाह बमोजिम नेपाल सरकारले पक्कैपनि समयमै सहि निर्णय लिनेछ । त्यस कारण यो आलेखमा म त्यतापट्टि मोडिन चाहिन । यस पटक मलाई चर्चा चाहिँ त्यो दृश्यको गर्न मन लागिरहेको छ, जुन राहत वितरणको समयमा देखियो ।
दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमजिवी वर्गलाई लक्षित गरी ल्याइएको राहत वितरण कार्यक्रममा दुइवटा ज्यादै उराठ लाग्दो दृश्यहरु देखिन पुगे । एउटा राहत लिनेको, अर्काे राहत वितरण गर्नेको । राहत कार्यक्रमको घोषणासंगै सामाजिक सञ्जालहरुका राहत वितरण गरिएका तस्विरहरु देखिन थाले । सामाजिक र राम्रो कामको प्रचार हुनु गलत होइन तर केहि दिन यता यसरी तस्विरहरु देखिन थाले मानौं फेसबुकमा राहत वितरणको फोटो पोष्ट गर्ने प्रतियोगिता चलिरहेको छ । यदि कोही व्यक्ति विशेषले आफ्नो निजी खर्चमा राहत वितरण गर्छ भने त्यस्ता तस्विरहरुसम्म पाच्य हुन सक्छन् किनभने उसले आफ्नो मेहनत र पसिनाको कमाइ दिँदैछ । तर सरकारी कोषबाट आएको राहत वितरण गर्नु छ अनि यसरी तस्विरहरु खिचिँदै छन् र सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरिँदैछन् मानौं उसले आफ्नो गास काटेर दिएको होस् । राहत वितरण गरेका तस्विर खिचिनु नै हुँदैन भन्ने मेरो तर्क होइन तर तस्विर कसरी खिचिएको छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ र महत्व राख्दो रहेछ । लिने लिँदैछन्, दिने दिँदैछन् यहि अवस्थामा कुनै तेस्रो पक्षले तस्विर लिइदिन्छ भने त्यो स्वाभाविक हुन्छ, एउटा हेर्न लायकको तस्विर । तर यहाँ त मानिसहरु राज्यकोषबाट खरिद गरिएको राहत वितरण गर्दा यसरी सल्फी खिचिरहेका छन् मानौं उ भन्दा ठूलो समाजसेवी र दानवीर अरु कोही छैन । तेस्रो पक्षले लिइदिएको तस्विर र भिडियोहरुमा पनि राहत बाँडनेहरुलाई राहत हातमा प¥यो परेन भन्ने भन्दा तस्विर भिडियोमा आफ्नो अनुहार प्रष्टसंग आए नआएको कुराले पिरलो परेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । आफ्नो कामको प्रशंसा अरुले गरिदिँदा राम्रो हो । यसरी आँफै आफ्नो प्रशंसा र प्रचार गर्न तल्लिन हुनुलाई कसरी बुझ्ने खोई ?
राहत शब्दले आफैमा बाध्यतालाई बुझाउँछ । राहतको सामान लिनु बाध्यता हो, रहर होइन । तर यसरी तस्विरहरु खिचिन थालेका छन् जसले गर्दा मानिसहरुलाई राहत लिनै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ । तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा यसरी पोष्ट हुँदैछन्, मानौं उभन्दा दुःखी, गरीब र दरिद्र समाजमै कोही छैन । उनीहरु फोटोमा आफ्नो मुहार बचाउँदै गरेको प्रष्ट देखिन्छ मानौं उसले राहत लिएर कुनै ठूलै अपराध गरेको होस् । हरेक व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वाभिमान र आत्मसम्मान हुन्छ । चाहे त्यो सडकमा मागेर एक छाक खाने होस् या चाहे तारे होटलमा चौरासी व्यञ्जन खाने होस् । तसर्थ दृश्यहरु क्यामेराको क्यानभासमा कैद गर्दै गर्दा कसैको आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा ठेस नपुगोस् भन्ने तर्फ पनि हामीले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ कि ?
अर्काे उदेकलाग्दो दृश्य देखियो राहत लिनेहरुको । प्रष्ट रुपमा भन्दा सरकारले राहतको कार्यक्रम ल्याएको ति श्रमजिबी वर्गहरुको लागि हो जो दिनभर कमाएर बेलुकाको सांगा टार्छन । तर समाजमा आफुलाई सम्पन्न भन्न रुचाउनेहरुको पनि राम्रै उपस्थिती देखियो, राहत लिनेको लाइनमा । घाँटीमा साँङ्लो जत्रो सुनको सिक्री लगाएका कतिले त राहत पाउनेको नाममा आफ्नो नाम नपारिदिएकोमा गुनासो गर्न भ्याए, आक्रोष पोख्न भ्याए । जनप्रतिनिधिहरु पनि आ–आफ्नो मान्छेलाई मात्र सिफारिस गरेको भनेर दोषा दोष गर्न उत्रिय कतिपय ठाउँमा । यहि दृश्यले सोच्न बाध्य बनाउँछ, के हामी नागरिकहरुमा पनि मानवता र नैतिकता अनि लाज सरम हराएकै हो ? हामी सधैं सरकारलाई दोष दिन्छौं, सरकारले यसो गरेन÷त्यसो गरेन, यो गलत ग¥यो ÷त्यो गलत ग¥यो । तर हामी आफै चाहीँ नागरिक दायित्व र जिम्मेबारीप्रति कति सचेत छौं त ? सरकारले वास्तवमै अप्ठ्यारोमा परेका श्रमजिवी निमुखा वर्गका लागि भनेर ल्याएको राहतमा हुनेखानेहरुले पनि भाग खोज्नु यो हाम्रो कस्तो नैतिकता हो ? हातमा १५/२० हजार पर्ने मोवाइल सेट बोकेर, छपक्कै सुनका गहना लगाएर १० केजी चामलको लागि लाइनमा बस्ने ? राज्यकोषको भनेपछि केही छाड्नै नहुने ? भलै त्यसको आवश्यकता अरुलाई किन नहोस र मानविय दृष्टिले हेर्दा हकदार अर्के किन नहोस् । के यहि हो हाम्रो नागरिक दायित्व ? हिन्दी भाषामा एउटा व्यङ्यात्मक भनाइ छ, “फ्रिमे मिली तो भाइ अलकत्रा भी पिली” कतै हामी पनि त्यस्तै त भइरहेका छैनौं ? एक पटक आफ्नै आत्मालाई साछी राखेर सोच्ने हो कि ?
एउटा राज्य सफल हुन नेतृत्व मात्र राम्रो भएर हुँदैन उक्त राज्यका नागरिक पनि त्यत्तिकै जिम्मेबार हुन आवश्यक छ । हामी फलानो नेताले यति खायो, ढिस्कानाले यति खायो भनेर विरोध गर्ने अनि आफै पनि राज्यकोषको पाए कौडीसम्म पनि नछोड्ने ? यदि हामी साँच्चै राष्ट्रको सचेत, जिम्मेबार र देशभक्त नागरिक हौं भने हामीले नेतृत्वलाई खवरदारी गर्ने मात्र होइन स्वयम आफुमा पनि सुधार ल्याउनु जरुरी छ । हामी भित्र रहेको लोभ, लालच, इष्र्या जस्ता कुविचार, कुसंस्कृतिको आफैबाट अन्त्य गर्नु जरुरी छ । खैर २०७६ साल पनि अब केही दिनमात्र शेष छ । नयाँवर्षले हामी सबैमा यस्ता कुविचार र कुसंस्कृतिको अन्त्य गराओस् र हामीमा साँच्चै नै एउटा जिम्मेबार र नैतिक नागरिक बन्न सक्ने क्षमताको विकास गरोस् । विश्वव्यापी माहामारीको अन्त्य गरी ०७७ साल एउटा सुखद समाचारसंगै आगमन होस् । सबैमा नयाँ वर्ष २०७७ को अग्रिम शुभ कामना ।